भगवान रामको मृत्यु यसरी भएको थियो, थाहापाउनुहोस् - ज्ञानविज्ञान
के तपाईलाई भगवान राम र लक्ष्मणकी दिदीकाे बारेमा थाहा छ ?
पौराणिक कथा अनुसार उनका पति शृंग ऋषि ऋषिशृंग विभण्डकका पुत्र थिए । ऋषिशृंगले नै सम्राट दशरथको छोरा होस् भनेर यज्ञ गराएका थिए । यज्ञ गराएकै स्थानमा हालसम्म पनि उनको आश्रम छ । रोमपद आफ्नी पत्निसहित अयोध्या आएपछि राजा दशरथलाई थाहा भयो कि उनका कोहि सन्तान थिएनन् ।
त्यसपछि राजा दशरथले उनलाई सन्तान बरदान दिए । राजा दशरथले अंगदेशका राजा रोमपदलाई आफ्नी छोरी शान्ता धर्मपुत्रीको रुपमा दिएका थिए । देवी शान्ताको विवाहबारे भनिन्छ कि एक दिन एक ब्राम्हण उनको दैलोमा आए र खेतिपातीमा मद्धतको लागी प्राथना गरे । तर आफ्नी छोरीसंग व्यस्त रहेको कारण रोमपदले ब्राम्हणको कुरा सुनेनन् र ब्राम्हण निराश भएर त्यहाबाट निस्किए ।
श्रीराम अवतार :
Don't Miss it किन हुन्छ बालबालिकामा मोटोपन ? बढी मोटोपनाले कस्तो समस्या आउछ ? जान्नुहोस्
Up Next मृत्यु भएका मानिस सपनामा देख्दा के हुन्छ ? हेर्नुहोस् १७२ खाले सपनाले दिने फलहरु